कुन समयमा कति खाना खाने ? यसरी मिलाएर खाएमा न रोग लाग्छ न भोक
अगस्ट 17, 2019 अगस्ट 17, 2019 साइन्स इन्फोटेक	0 Comments खाना, समय
रोग र भोक हटाउन कुन समयमा कति खाना खाने ? प्राय: मानिसले पटक-पटक खाना खाएपनि छिनछिनमा भोक लागिरहेको हुन्छ । हामीले पेटको भोक निको पार्नलाई हलुका भोजन खानुपर्ने हुन्छ । तर पनि हामीलाई त्यो भोजन खाएको आधा घण्टामा फेरि पनि भोक लागेको हुन्छ । त्यसो त भोक लाग्नु शरीरलाई राम्रो हो । आवश्यक भन्दा वढी भोक लाग्नु कुनै रोगको कारण पनि हुन सक्छ ।
खानामा प्रोटिन र फइबरको कमी भयो भने प्रत्येक व्यक्तिको पेट खाली र जतिखेर पनि भोक लागे जस्तो हुन्छ । तसर्थ यी प्रोटिनयुक्त खानेकुरा खाँदा पेट भरिएजस्तो अनुभव हुन्छ । क्यालोरीको कमीले गर्दा छिटो भोक लाग्छ । यसले शरीरलाई काम गर्नका लागि सम्पूर्ण आहारा दिन्छ । त्यसैले भरपुर्ण खानेकुरा खानुपर्दछ र प्रत्येक व्यक्ति थोरैमा पनि कम्तिमा ८ घण्टा सुत्नुपर्न हुन्छ ।
यसकारण पुरा निद्रा लिदा पेट ठिक हुने भोक नलाग्ने समस्याबाट बच्न सकिन्छ । अधिकाँश मानिस बिहानको खाना खादैनन यसले गर्दा समस्या आउँछ र जतिखेर पनि भोक लागेजस्तो हुन्छ । केहि मानिसहरु छिटो छिटो खाना खान्छन नचपाईकन खाँदा खानेकुरा पच्दैन अनि पेटसम्बन्धी समस्या आइलाग्छ । त्यसैले खानेकुरा जहिलेपनि चपाएर खानुस् । खाना जति राम्ररी पच्छ, त्यति कम भोक लाग्छ ।
खाना खाँदा के गर्नु हुन्छ र के गर्नु हुदैन ? जानी राखौ
बेलुकीको खाना के कस्तो खाने ? जानी राखौ
← मन्दिरमा नरिवल फुटाउनुको रोचक कारणहरु
मानिसले किन दिन्छ पैसालाई महत्व ? →
मे 17, 2019 मे 17, 2019 साइन्स इन्फोटेक 1
मन्त्रद्वारा खाना नपच्ने समस्याको उपचार
नोभेम्बर 3, 2019 नोभेम्बर 3, 2019 साइन्स इन्फोटेक 0